သူအတုယူရတဲ့ ​နောက်​တန်းအစွန်​လူ​ နှစ်​ဦးကို ထုတ်​​ဖော်​ သွားခဲ့တဲ့ အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး - SPORTS MYANMAR
သူအတုယူရတဲ့ ​နောက်​တန်းအစွန်​လူ​ နှစ်​ဦးကို ထုတ်​​ဖော်​ သွားခဲ့တဲ့ အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး
လီ​ဗာပူး ရဲ့ ထရန်​အလက်​ဇန်းဒါး အာနိုးက သူ စံပြု​လေ့လာ ခဲ့ရတဲ့ ညာ​နောက်​ခံလူ နှစ်​ဦးဟာ ဘရာဇီး ရဲ့ ဒါနီအဲ​ဗက်​စ်​ နဲ့ ဂျာမနီရဲ့ ဖိလစ်​လမ်း တို့ ဖြစ်​တယ်​လို့ ထုတ်​​ဖော်​ သွားခဲ့ပြီး သူ့အ​နေနဲ့ ​အောင်​မြင်​မှု​တွေ ထပ်​မံ ရှာ​ဖွေ ​နေတဲ့ လီ​ဗာပူး အသင်း အတွက်​ သွင်းဂိုး ​တွေနဲ့ အ​ထောက်​အကူ ပြုသွားဖို့ ပစ်​မှတ်​ ထား​နေတယ်​လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။ အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး ဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်​တန်း ည​နောက်​ခံလူ​တွေ ထဲက တစ်​ဦး အဖြစ်​ လျှင်​လျှင်​မြန်​မြန်​ တိုးတက်​ လာခဲ့သူ ဖြစ်​ပြီး တကယ့်​​တော့ ၎င်းရဲ့ နည်းပြ ယာဂန်​က​လော့ ကိုယ်​တိုင်​က အင်္ဂလန်​ ကြယ်​ပွင့်​ဟာ ကမ္ဘာ့အ​ကောင်းဆုံး ညာ​နောက်​ခံလူ ဖြစ်​တယ်​လို့​တောင်​ ချီးကျူး ထားပါတယ်​။
အသက်​ ၂၀ အရွယ်​သာ ရှိ​သေး​ပေမယ့်​လည်း အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုးဟာ ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဖိုင်​နယ်​ ၂ ကြိမ်​ ၊ ဥ​ရောပ ချန်​ပီယံ ဆုဖလား နဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား​တွေကို ကစားခွင့်​ ရထား ခဲ့ပြီး ဖြစ်​ပါတယ်​။ အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လိဂ်​ပြိုင်​ပွဲရဲ့ ဂိုးဖန်​တီးမှု အများဆုံး ​နောက်​ခံလူ ဖြစ်​ခဲ့တဲ့အပြင်​ လီ​ဗာပူး ညာ​နောက်​ခံလူဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ဖြတ်​တင်​​ဘော အများဆုံး လုပ်​ထားသူ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒါ​ပေမယ့်​လည်း အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး က သူ့ရဲ့ အ​ကောင်းဆုံး ပုံစံကို ရဖို့ အ​ဝေးကြီး လို​နေ ​သေးတယ်​လို့ ဆိုလိုက်​ပါတယ်​။ ဆက်​လက်​ပြီး အာနိုးက ဘာစီလိုနာ ညာ​နောက်​ခံလူ​ဟောင်း အဲ​ဗက်စ်​နဲ့ ဘိုင်​ယန်​မြူးနစ်​ ဂန္ထ၀င်​ ဖိလစ်​လမ်း တို့ဟာ သူ အတူယူရတဲ့ ကစားသမား​တွေ ဖြစ်​​ကြောင်းနဲ့ လီ​ဗာပူး အတွက်​ ​အောင်​မြင်​မှု​တွေ ရယူ ​ပေးရန်​ ရည်​မှန်း ထား​ကြောင်း ဆိုသွားပါတယ်​။
အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး က “ဂိုး​တွေ သွင်းယူဖို့ဟာ ကျွန်​​တော်​ တိုးတက်​ ချင်​တဲ့ အရာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ​မော်​ဒန်​​ဘောလုံး ​လောကရဲ့ ​နောက်​တန်း အစွန်​လူ​တွေ အ​နေနဲ တိုက်​စစ်​ကို အများကြီး လိုက်​ပါ ကစားရကာ အသင်းအတွက်​ အခွင့်​အ​ရေး​တွေ ဖန်​တီးတာ ၊ ဂိုး​တွေ ဖန်​တီးတာ ၊ ​ဘောလုံး ​ပေးပို့မှု​တွေ ၊ ​မျှော​ဘော​တွေ စတဲ့ အရာ​တွေ အများကြီး လုပ်​​ပေးဖို့ လိုပါတယ်​။ ကျွန်​​တော့်​ အ​နေနဲ့ ​နောက်​တဆင့်​ကို တက်​ကာ အသင်း အတွက် ​လေးဂိုး ငါးဂိုး သွင်း​ပေးဖို့ ဘာ့​ကြောင့်​ မလုပ်​ နိုင်​ရမှာလဲ?
ကျွန်​​တော်​ ​နောက်​တန်း အစွန်​လူ​တွေကို ​လေ့လာတဲ့ အခါ ကျွန်​​တော်​ အမြဲ အတုယူ​လေ့ ရှိတာက​တော့ ဒါနီအဲ​ဗက်​စ်​ နဲ့ ဖိလစ်​လမ်း တို့ဖြစ်​ကြပါတယ်​။ ကျွန်​​တော့်​အတွက်​ က​တော့ ဒါနီအဲ​ဗက်​စ်​ ဟာ တိုက်​စစ်​ကို အ​တော်​ လိုက်​ပါ ကစားတဲ့ ကစားသမား ဖြစ်​ပြီး ခံစစ်​ပိုင်း မှာလည်း မာ​ကျော ကျစ်​လစ်​စွာ ကစား နိုင်​သူပါ။ ဒါ​ပေမယ့်​ သူ့ရဲ့ တိုက်​စစ်​ ဥာဏ်​ရည်​ဥာဏ်​​သွေး က တကယ်​​ကောင်းလှပြီး ​တောင်​ပံ ကစားသမား တစ်ဦးနီးပါး အကျိုးပြု နိုင်​သူပါ။ ကျွန်​​တော်​တို့ရဲ့ analyst ​တွေဟာ ဒါနီအဲ​​ဗက်​စ်​ရဲ့ အ​ကောင်းဆုံး လုပ်​ပြ ခဲ့မှု​တွေကို ​ဗီဒီယို ကလစ်​​တွေ စုစည်းကာ ကျွန်​​တော့်​ကို ​လေ့လာ​စေ ခဲ့ပါတယ်​။ ​နေရယူပုံ​တွေ ၊ ဆုံးဖြတ်​ချက်​ ချပုံ​တွေ နဲ့ ​ပြေးလွှားပုံ​တွေ အဓိက ​လေ့လာ ပါတယ်​။ ကျွန်​​တော်​ဟာ ဖိလစ်​လမ်း ရဲ့ ခံစစ်​ကစားပုံ နဲ့ အဲ​ဗက်​စ်​ရဲ့ တိုက်​စစ်​ ကစားပုံ​တွေကို ပိုမို ​လေ့လာ ဖြစ်​ခဲ့ပါတယ်​။
ကျွန်​​တော်​ဟာ ​နောက်​တန်း အစွန်​လူ​တွေရဲ့ တိုက်​စစ်​ ကစားဟန်​ကို ပိုကြိုက်​ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ခံစစ်​ပိုင်းက ပို အ​ရေးကြီးတယ်​ ဆိုတာ ကျွန်​​တော်​ နားလည်​ပါတယ်​ ။ မာ​ကျောတဲ့ ကစားကွက်​ မရှိဘူးဆိုရင်​ ကိုယ့်​အသင်းဟာ နိုင်​ရင်​​တောင်​ ၅-၄ တို့ ၄-၃ တို့နဲ့ပဲ နိုင်​မှာပါ။ ကျွန်​​တော်​ ဒါမျိုး မလိုချင်​ပါဘူး။ ကျွန်​​တော်​ဟာ ​လေ့လာ သင်​ယူ ​နေဆဲ ဆိုတာ သိပါတယ်​။ ပွဲအတွင်းမှာ ကျွန်​​တော်​ ပို​ကောင်း​အောင်​ လုပ်​နိုင်​ ​သေးတဲ့ အပိုင်း​တွေ ရှိ​နေ​သေးတယ်​လို့ ခံစား မိပါတယ်​။
တိုးတက်​ဖို့ အတွက်​ ​လေ့လာသင်​ယူဖို့ အတွက်​ အဆင့်​ဆင့်​ ​ပြောင်းလဲ လာဖို့ အတွက်​ ​နေရာ ဆိုတာ အမြဲ ရှိ​နေပါတယ်​ ။ မျက်​လုံးမှိတ်​ပြီး ဒါဟာ ငါ့ရဲ့ limit ပဲလို့ ​တွေးလို့ မရပါဘူး။ အဲလိုသာ ​တွေးလိုက်​မယ်​ ဆိုရင်​ ဒါဟာ ကိုယ့်​ရဲ့ limit ဖြစ်​သွားမှာပါ။ ငါ ​လေ့လာသင်​ယူ နိုင်​​သေးတာပဲလို့ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ​ပြောတဲ့ အခါ ​ကောင်းကင်​ကြီး တစ်​ခုလုံးဟာ limit ပါပဲ။” လို့ ​ပြောသွားပါတယ်​။
သူအတုယူရတဲ့ ​နောကျ​တနျးအစှနျ​လူ​ နှဈ​ဦးကို ထုတျ​​ဖျော​ သှားခဲ့တဲ့ အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုး
လီ​ဗာပူး ရဲ့ ထရနျ​အလကျ​ဇနျးဒါး အာနိုးက သူ စံပွု​လလေ့ာ ခဲ့ရတဲ့ ညာ​နောကျ​ခံလူ နှဈ​ဦးဟာ ဘရာဇီး ရဲ့ ဒါနီအဲ​ဗကျ​ဈ​ နဲ့ ဂြာမနီရဲ့ ဖိလဈ​လမျး တို့ ဖွဈ​တယျ​လို့ ထုတျ​​ဖျော​ သှားခဲ့ပွီး သူ့အ​နနေဲ့ ​အောငျ​မွငျ​မှု​တှေ ထပျ​မံ ရှာ​ဖှေ ​နတေဲ့ လီ​ဗာပူး အသငျး အတှကျ​ သှငျးဂိုး ​တှနေဲ့ အ​ထောကျ​အကူ ပွုသှားဖို့ ပဈ​မှတျ​ ထား​နတေယျ​လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။ အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုး ဟာ ကမ်ဘာ့ထိပျ​တနျး ည​နောကျ​ခံလူ​တှေ ထဲက တဈ​ဦး အဖွဈ​ လြှငျ​လြှငျ​မွနျ​မွနျ​ တိုးတကျ​ လာခဲ့သူ ဖွဈ​ပွီး တကယျ့​​တော့ ၎င်းငျးရဲ့ နညျးပွ ယာဂနျ​က​လော့ ကိုယျ​တိုငျ​က အင်ျဂလနျ​ ကွယျ​ပှငျ့​ဟာ ကမ်ဘာ့အ​ကောငျးဆုံး ညာ​နောကျ​ခံလူ ဖွဈ​တယျ​လို့​တောငျ​ ခြီးကြူး ထားပါတယျ​။
အသကျ​ ၂၀ အရှယျ​သာ ရှိ​သေး​ပမေယျ့​လညျး အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုးဟာ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဖိုငျ​နယျ​ ၂ ကွိမျ​ ၊ ဥ​ရောပ ခနျြ​ပီယံ ဆုဖလား နဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလား​တှကေို ကစားခှငျ့​ ရထား ခဲ့ပွီး ဖွဈ​ပါတယျ​။ အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုး ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လိဂျ​ပွိုငျ​ပှဲရဲ့ ဂိုးဖနျ​တီးမှု အမြားဆုံး ​နောကျ​ခံလူ ဖွဈ​ခဲ့တဲ့အပွငျ​ လီ​ဗာပူး ညာ​နောကျ​ခံလူဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ဖွတျ​တငျ​​ဘော အမြားဆုံး လုပျ​ထားသူ ဖွဈ​ပါတယျ​။
ဒါ​ပမေယျ့​လညျး အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုး က သူ့ရဲ့ အ​ကောငျးဆုံး ပုံစံကို ရဖို့ အ​ဝေးကွီး လို​နေ ​သေးတယျ​လို့ ဆိုလိုကျ​ပါတယျ​။ ဆကျ​လကျ​ပွီး အာနိုးက ဘာစီလိုနာ ညာ​နောကျ​ခံလူ​ဟောငျး အဲ​ဗကျဈ​နဲ့ ဘိုငျ​ယနျ​မွူးနဈ​ ဂန်ထဝငျ​ ဖိလဈ​လမျး တို့ဟာ သူ အတူယူရတဲ့ ကစားသမား​တှေ ဖွဈ​​ကွောငျးနဲ့ လီ​ဗာပူး အတှကျ​ ​အောငျ​မွငျ​မှု​တှေ ရယူ ​ပေးရနျ​ ရညျ​မှနျး ထား​ကွောငျး ဆိုသှားပါတယျ​။
အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုး က “ဂိုး​တှေ သှငျးယူဖို့ဟာ ကြှနျ​​တျော​ တိုးတကျ​ ခငျြ​တဲ့ အရာ ဖွဈ​ပါတယျ​။ ​မျော​ဒနျ​​ဘောလုံး ​လောကရဲ့ ​နောကျ​တနျး အစှနျ​လူ​တှေ အ​နနေဲ တိုကျ​စဈ​ကို အမြားကွီး လိုကျ​ပါ ကစားရကာ အသငျးအတှကျ​ အခှငျ့​အ​ရေး​တှေ ဖနျ​တီးတာ ၊ ဂိုး​တှေ ဖနျ​တီးတာ ၊ ​ဘောလုံး ​ပေးပို့မှု​တှေ ၊ ​မြှော​ဘော​တှေ စတဲ့ အရာ​တှေ အမြားကွီး လုပျ​​ပေးဖို့ လိုပါတယျ​။ ကြှနျ​​တျော့​ အ​နနေဲ့ ​နောကျ​တဆငျ့​ကို တကျ​ကာ အသငျး အတှကျ ​လေးဂိုး ငါးဂိုး သှငျး​ပေးဖို့ ဘာ့​ကွောငျ့​ မလုပျ​ နိုငျ​ရမှာလဲ?
ကြှနျ​​တျော​ ​နောကျ​တနျး အစှနျ​လူ​တှကေို ​လလေ့ာတဲ့ အခါ ကြှနျ​​တျော​ အမွဲ အတုယူ​လေ့ ရှိတာက​တော့ ဒါနီအဲ​ဗကျ​ဈ​ နဲ့ ဖိလဈ​လမျး တို့ဖွဈ​ကွပါတယျ​။ ကြှနျ​​တျော့​အတှကျ​ က​တော့ ဒါနီအဲ​ဗကျ​ဈ​ ဟာ တိုကျ​စဈ​ကို အ​တျော​ လိုကျ​ပါ ကစားတဲ့ ကစားသမား ဖွဈ​ပွီး ခံစဈ​ပိုငျး မှာလညျး မာ​ကြော ကဈြ​လဈ​စှာ ကစား နိုငျ​သူပါ။ ဒါ​ပမေယျ့​ သူ့ရဲ့ တိုကျ​စဈ​ ဉာဏျ​ရညျ​ဉာဏျ​​သှေး က တကယျ​​ကောငျးလှပွီး ​တောငျ​ပံ ကစားသမား တဈဦးနီးပါး အကြိုးပွု နိုငျ​သူပါ။ ကြှနျ​​တျော​တို့ရဲ့ analyst ​တှဟော ဒါနီအဲ​​ဗကျ​ဈ​ရဲ့ အ​ကောငျးဆုံး လုပျ​ပွ ခဲ့မှု​တှကေို ​ဗီဒီယို ကလဈ​​တှေ စုစညျးကာ ကြှနျ​​တျော့​ကို ​လလေ့ာ​စေ ခဲ့ပါတယျ​။ ​နရေယူပုံ​တှေ ၊ ဆုံးဖွတျ​ခကျြ​ ခပြုံ​တှေ နဲ့ ​ပွေးလှားပုံ​တှေ အဓိက ​လလေ့ာ ပါတယျ​။ ကြှနျ​​တျော​ဟာ ဖိလဈ​လမျး ရဲ့ ခံစဈ​ကစားပုံ နဲ့ အဲ​ဗကျ​ဈ​ရဲ့ တိုကျ​စဈ​ ကစားပုံ​တှကေို ပိုမို ​လလေ့ာ ဖွဈ​ခဲ့ပါတယျ​။
ကြှနျ​​တျော​ဟာ ​နောကျ​တနျး အစှနျ​လူ​တှရေဲ့ တိုကျ​စဈ​ ကစားဟနျ​ကို ပိုကွိုကျ​ပါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ ခံစဈ​ပိုငျးက ပို အ​ရေးကွီးတယျ​ ဆိုတာ ကြှနျ​​တျော​ နားလညျ​ပါတယျ​ ။ မာ​ကြောတဲ့ ကစားကှကျ​ မရှိဘူးဆိုရငျ​ ကိုယျ့​အသငျးဟာ နိုငျ​ရငျ​​တောငျ​ ၅-၄ တို့ ၄-၃ တို့နဲ့ပဲ နိုငျ​မှာပါ။ ကြှနျ​​တျော​ ဒါမြိုး မလိုခငျြ​ပါဘူး။ ကြှနျ​​တျော​ဟာ ​လလေ့ာ သငျ​ယူ ​နဆေဲ ဆိုတာ သိပါတယျ​။ ပှဲအတှငျးမှာ ကြှနျ​​တျော​ ပို​ကောငျး​အောငျ​ လုပျ​နိုငျ​ ​သေးတဲ့ အပိုငျး​တှေ ရှိ​နေ​သေးတယျ​လို့ ခံစား မိပါတယျ​။
တိုးတကျ​ဖို့ အတှကျ​ ​လလေ့ာသငျ​ယူဖို့ အတှကျ​ အဆငျ့​ဆငျ့​ ​ပွောငျးလဲ လာဖို့ အတှကျ​ ​နရော ဆိုတာ အမွဲ ရှိ​နပေါတယျ​ ။ မကျြ​လုံးမှိတျ​ပွီး ဒါဟာ ငါ့ရဲ့ limit ပဲလို့ ​တှေးလို့ မရပါဘူး။ အဲလိုသာ ​တှေးလိုကျ​မယျ​ ဆိုရငျ​ ဒါဟာ ကိုယျ့​ရဲ့ limit ဖွဈ​သှားမှာပါ။ ငါ ​လလေ့ာသငျ​ယူ နိုငျ​​သေးတာပဲလို့ ကိုယျ့​ကိုယျ​ကို ​ပွောတဲ့ အခါ ​ကောငျးကငျ​ကွီး တဈ​ခုလုံးဟာ limit ပါပဲ။” လို့ ​ပွောသှားပါတယျ​။